“Xisbina Kuwa Hor-fadhiya Ma Ogoli, Oo Maaha Kuwii Ummadda Dhaqi Lahaa..” Sheekh Aadan-Siiro | Saxil News Network
“Xisbina Kuwa Hor-fadhiya Ma Ogoli, Oo Maaha Kuwii Ummadda Dhaqi Lahaa..” Sheekh Aadan-Siiro
January 6, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa (Saxilnews) – Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa ka digay in la buriyo Heshiiska Reer Somaliland ka dhexeeya ee lagu dhisay Dawladnimada iyo Hanaanka Is-maamul ee 26-tan jirsaday.
Sheekh Aadan-Siiro oo khudbaddii Jimcaha ee Maanta kaga hadlay Ahmiyadda Muslimku siiyey ilaalinta Heshiiska iyo Axdiga Ummaddu wada gasho, ayaa wer-wer ka muujiyey inay jiraan Dad doonaya inay burburiyaan heshiiska reer Somaliland u saamaxay inay Dawlad gaar ah dhistaan isla-markaana Nabadgalyo iyo Horumar ku tallaabsadaan, waxaanu Masuuliyiinta Talada Ummadda Hadda haya iyo Dadka kale ee Wax ka go’aan u soo jeediyey in ilaaliyo Heshiiska Ummadda.
Sheekhu wuxuu ka warrramay halka Islaamku ka taagan yahay ilaalinta Heshiiska la wada galo, “Al-imaamu Jawhari mar uu ka hadlayey heshiisyada Dadka Muslimiinta ahi ku jiraan in la burburiyo, wuxuu yidhi ‘Burinta heshiisku waa iyadoo la dumiyey Dhisme la dhisay ama aad xumayso wixii la soo dhisay.’ Culimadu waxa kale oo ay yidhaahdeen Xagga Sharciga burinta Heshiisku waa in Qofku fulin waayo wuxuu sheegay. Waa Arrimaha aynu Maanta arkayno, Nimankaa Maanta Masuuliyiinta ah ee Maalin walba Magaca ILAAHAY lagu dhaarinayo inay ilaaliyaan Dadka, Diinta iyo Dalka iyo wixii Ummaddani ku heshiisay. Maxaa u dhexeeya inaad Ballanka buriso iyo inaad khiyaamays.? Culimadu waxay yidhaahdeen khiyaamada hoos baad wax u wadaysaa, laakiin Burinta marna si hoose ayaad u burinaysaa, marna waad caddeysanaysaa iyadoo Dadkii oo dhami soo wada taagan yihiin. ILAAHAY wuxuu yidhi fuliya ballanka aad gashaan, ballanka aad gashaan wuxuu ahaaday mid la is-waydiinayo (Aakhiro). Rasuulkuna (CSW) wuxuu yidhi haddaad doonayso inaad ogaato Munaafaqu wuxuu yahay ka eeg Saddex, hadduu Ballan-qaado ma fuliyo, haddii wax lagu aaminana wuu khiyaameeyaa, hadduu doodo waxaan meesha jirin buu keenayaa, halkuu ku ekaan lahaa xaqiiqada.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, “Afartan Sannadood baanu qaylinayey, waxaad u soo taagnayd ee aad heshiiskeeda fadhiday, ayaa mid Shalay yimid uu doonayaa inuu Adiga kuu fasiro uu been cad kaa iibiyo. Wuxuu doonayaa inuu Tafsiir aan jirin oo aanay Ummaddu ogeyn oo aan ahayn wixii lagu heshiiyey inuu Dadka ka iibiyo, waana waxyaabaha Ummaddu ku dunto, ee laga yeeli waayay Raggii Jannada loogu baaqay.”